अवरुद्ध खोप अभियान फेरि सुरु हुने, चिनियाँ खोपको दोस्रो मात्रा जेठ लाग्नासाथ - Lekhapadhi काेराेनाभाइरस : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी २८ बैशाख २०७८, मंगलवार १०:०० मा प्रकाशित
विविसी नेपाली । कोरोनाभाइरस महामारीको गम्भीर चपेटामा परेका बेला नेपालमा खोप अभियानसमेत केही सातायता अवरुद्ध बनिरहेको छ।
तर अब जेठ २ गतेदेखि उक्त अभियान फेरि सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत खोप शाखाका प्रमुखले बताएका छन्।
वैशाख १६ गतेदेखि लकडाउन लागु भएपश्चात् खोप अभियान स्थगित भएको थियो। खोप केन्द्रहरूमा अचाक्ली भिड देखिएपछि चिन्ता बढेका थिए।
चिनियाँको दोस्रो मात्राबाट सुरु
“अब अवस्था यही कायम रहेको खण्डमा हामी जेठ २ गतेदेखि चिनियाँ भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा लगाउन सुरु गर्छौँ,” खोप शाखाका प्रमुख झलक गौतमले बीबीसीलाई बताए।
उक्त चिनियाँ खोप चैतको तेस्रो सातादेखि रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलान्चोक, काठमाण्डू, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा वितरण गरिएका थिए। यिनै जिल्लामा पहिलो मात्रा लगाएका २ लाख ८८ हजार मानिसलाई अब दोस्रो मात्रा लगाइने गौतमले बताए।
चीनले ८ लाख मात्राको भेरोसेल खोप नेपाललाई अनुदानमा दिएको थियो। उक्त खोपलाई अघिल्लो साता विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति दिएको छ।
अब खोप लगाउने बेलामा भिडभाड नहोस् भन्ने हेतुले केन्द्रहरूको सङ्ख्या बढाइने, दैनिक कोटा तोकिने अनि स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा स्वयंसेवकहरूको सहयोग लिइने उनले बताए।
केन्द्रहरूबारे सार्वजनिक जानकारी दिइने उनले बताए।
कोभिशील्डको अझै अनिश्चय
भारत सरकारबाट अनुदानमा आएको १० लाख, सिरम इन्स्टिच्यूटसँग किनेको १० लाख र खोपसम्बन्धी विश्वव्यापी अभियान ‘कोभ्याक्स’बाट उपलब्ध भएको तीन लाख ४८ हजार गरी अहिलेसम्म झन्डै साढे २३ लाख कोभिशील्ड खोप नेपाल भित्रिएको छ। भारतीय सेनाले नेपाली सेनालाई छुट्टै १ लाख मात्रा कोभिशील्ड खोप पनि दिएको छ।
तीमध्ये करिब पाँच लाखले मात्र दोस्रो मात्रा लगाउन पाएका छन् भने अधिकांशले एक मात्रा मात्र लगाएका छन्।
खोपको अभावका कारण उनीहरूले दोस्रो मात्रा लगाउने योजना अझै अनिश्चयमै रहेको छ।
तर अब सरकारले आफ्नो स्टकमा बाँकी रहेको कोभिशील्ड प्राथमिकता तोकेर ७७ वटै जिल्लामा पठाउन लागेको गौतमले बताए।
“थोरै थोरै मात्रामा सबै जिल्लामा पठाउँछौँ। भण्डारमा खोप राखिरहँदैनौँ। यसअघि छुटेका अग्रपङ्क्तिमा खटिनुपर्नेहरूलाई प्राथमिकता तोकेर खोप दिलाइनेछ,” उनले भने।
दुई मात्राको अन्तराल बढ्दा कस्तो प्रभाव?
नेपालमा हाल खोपको दुवै मात्रा लिइसकेका मानिसहरूको सङ्ख्या ३ लाख ७० हजार रहेको छ।
चिनियाँ भेरोसेल तथा आस्ट्राजेनेका कोभिशील्डको एक मात्रा मात्र लगाएकाहरूको सङ्ख्या २४ लाख ८२ हजार रहेको छ।
खासगरी कोभिशील्डको पहिलो मात्रा लगाएका ६५ वर्षमाथि उमेर समूहका मानिसहरूले तोकिएको ८-१२ हप्ताको अन्तरालमा दोस्रो मात्रा पाउन अब कठिन भइसकेको छ।
त्यसो हुँदा कस्तो प्रभाव पर्ला? यो प्रश्नको उत्तर सहज छैन। अन्तराल बढ्दा हुने असरबारे भरपर्दा वैज्ञानिक जबाफ अहिले उपलब्ध छैनन्।
“तर पहिलो मात्रा खोप मात्र लगाएकाहरूले पनि आत्तिनुपर्दैन। त्यसले पनि शरीरमा केही न केही मात्रामा एन्टीबडी उत्पादन गरेकै हुन्छ। उनीहरूलाई कोभिडको जटिलता हुनबाट रोक्छ र उनीहरूबाट सङ्क्रमण पनि केही कमै हुन्छ,” गौतमले भने।
आगामी दिनमा रुस लगायत खोप उत्पादक सबै देश र कम्पनीबाट पनि सकेसम्म छिटो खोप ल्याउन आफूहरूले पत्राचार, छलफल अनि कूटनीतिक पहल गरिरहेको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्। याे समाचार विविवसी नेपाली अनलाइनमा सञ्जय ढकाल लेखेका छन् ।
काठमाडाैंका चाेक चाेकमा हात धुन साबुन पानी । चहलपहल एमदमै कम । थप दुई जनामा कोरोनाभाइरस पुष्टि कोरोना भाइरस नेपाल: थप ३ सय १४ जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमित संख्या ३७६२ पुग्यो कोरोना भाइरस नेपाल: संक्रमितको संख्यामा नयाँ रेकर्ड, २४ महिलासहित थप ४४८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि काेराेना भाइरस नेपालः थप ४२५ जनामा संक्रमण पुष्टि, निको हुनेको संख्या ९७४ पुग्यो विगत २४ घण्टामा २३२ व्यक्तिमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण, दुई जनाको मृत्यु